Miresaha aminay, Ampandehanin'i LiveChat
Fikarakarana ratra hydrogel
Ny famokarana hydrogel
Vaovao momba ny vokatra tamin'ny Novambra
Vokatra santionany ho an'ny mpanjifa amerikana, patch gel mampitony ary gel toy ny jelly. Ny vokatra saron-tava hydrogel nalain'ny mpanjifa an-trano sinoa. Ny angano dia mampiseho ampahany amin'ny vokatra. Ny vokatra farany dia atolotra ho an'ny mpanjifa amin'ny endrika essence moisturize + g...
Fanazavana sasany momba ny orinasanay momba ny famatsiana herinaratra any Shina
Ho an'ireo mpanjifa malalanay: Mino aho fa efa nandre momba izany ianao. Vao tsy ela akory izay, niparitaka teny amin'ireo orinasa any Shina ny fihodinana fahatapahan-jiro goavana, saingy mety tsy hitovy amin'izay hitanao tamin'ny vaovao ny tiako resahina. Na dia toa "mahafinaritra" aza ny "atsaharo ny famokarana sy ny fampihenana", amin'ny fa...
Fampiharana ny hydrogel amin'ny fitaovana bolus radiotherapy
Ho an'ny faritra kendrena ambony (fivontosana), na ny teknolojian'ny taratra elektronika nentim-paharazana na ny teknolojia fanamafisam-peo X-ray, rehefa mandalo amin'ny taratra ambony ny taratra, dia vokatry ny fisian'ny taratra ny taratra. manao...
Fandrosoana fikarohana momba ny band-aids
Inona no atao hoe band-aids ranon-javatra: Ny band-aid ranon-javatra dia akanjo ara-pitsaboana manana fahaiza-miraikitra amin'ny tavy, ary azo ampiasaina ho toy ny adhesive tavy ara-pitsaboana ihany koa. Fanampiana ranon-javatra dia atao amin'ny famongorana ireo fitaovana mandrafitra sarimihetsika ao anaty solvent, ary mifikitra mafy amin'ny faritra maratra amin'ny hoditra ...
Siansa malaza tsotra: fantaro hoe inona ny hydrogel ao anatin'ny 1 minitra? Inona no ampiasaina?
[Famaritana ara-tsiansa] Ny hydrogels dia tamba-jotra misy rojo polymère hydrophilika, antsoina hoe gel colloidal, izay ny rano no fitaovana fanaparitahana. Ny lozisialy telo-dimensional dia noho ny rojo polymère hydrophilika izay mitambatra amin'ny fifamatorana. Noho ny fifandraisana mifamatotra, ny fahamendrehana ara-drafitra ny ...
Ny artifact fampihenana ny tazo amin'ny zaza - ny patch mangatsiaka
Vonona amin'ny fahavaratra ve ianao? Efa vonona ve ny zanakao? Mafana ny andro amin’ny fahavaratra, ary matahotra mafy ny “tazo” an’ilay zaza ny reny. Rehefa mahatratra 37.5°C na ambony ny hafanan’ny kibon’ny zaza dia mihoatra ny 38°C ny mari-pana ao amin’ny vozon-tranonjaza sy ny maripanan’ny sofina, dia azo faritana fa...
Hatramin'ny niorenany tamin'ny taona 2018, Suzhou Hydrocare Tech dia nekena ho orinasa manan-kery eo amin'ny sehatry ny hydrogel any Shina.
No. 11, Chengpu Road, Shengpu Town, Suzhou Industrial Park Jiangsu Provice, Shina